Ukukhetha umkhondo we-GPS othembekileyo womntwana wakho une-Autism | I-Singapore ephezulu ye-GPS ye-GPS Tracker ye-Autism / ye-Autistic yabantwana kunye neDementia yabantu abadala
Tags: I-Autism Kid GPS Tracker
Ngaba ukhangela i-Tracker yeGPS elungele abantwana bakho abathandekayo? Ngokwengxelo, ukuya kuthi ga kwi-49 yeepesenti yabantwana abane-ASD bazibophela ngexesha elinye emva kweminyaka eyi-4. Nangona kunjalo, kwimeko enjalo, umkhondo we-GPS unokungqinwa liqabane elinokuthenjwa labantwana bakho kunye nawe kunye neendlela ezilungileyo zokugcina umntwana wakho ekhuselekile kwaye evakalayo. Kodwa, ukuba ungumzali womntwana oneemfuno ezizodwa, kungcono wazi ukuba ayizizo zonke izinto onokuthi zikusebenzele. Kufanele ukuba kubekho umkhondo we-GPS wabantwana bakho abakhethekileyo abanempawu ezintle. Awudingi ukuba nexhala, kwaye apha siza kukwazisa ukuba ungamjonga njani umntwana wakho ekhaya nokuba ungaphandle kwekhaya. Usebenzisa inkqubo yokulandela umkhondo we-GPS uya kufumana ingxelo yesibini nganye malunga nomntwana wakho akwenzayo. Abantwana bafuna ukuhoywa ngokukodwa, ngenxa yoko, njengabazali kuya kufuneka ukhathalele abantwana bakho ngayo yonke indlela enokwenzeka yokuqinisekisa ukhuseleko lwabo.
Gcina iliso laBantwana
Ukuba ufuna ukuba nombono ongcono wokufumana apho bakhoyo abantwana bakho ngexesha elithile kunye nalapho bakhoyo, unokufuna ukuthenga isixhobo sokulandela umkhondo seGPS sabantwana bakho kwaye uphumle. Xa uza kuphuma kwintengiso uza kufumana iintlobo zamacebo okulandela umkhondo we-GPS aneempawu ezibalaseleyo, kodwa zeziphi izinto ezibalulekileyo ekufuneka uzigcine engqondweni xa ukhetha i-tracker eyi-GPS elungiselelwe abantwana bakho? Kweli nqaku, okokuqala siza kuchaza ukuba yeyiphi isixhobo sokulandela umkhondo we-GPS kwaye ke ndikuxelele izinto ezibalulekileyo ekufuneka uziqwalasele xa uthenga i-tracker ye-GPS.
Yintoni inkqubo yokulandela umkhondo we-GPS kwaye isebenza njani?
Inkqubo yokuBekwa kwiHlabathi liphela sisixhobo sokuhambisa esenziwe yinto eshukumayo, umntu, okanye umthwalo osetyenziswayo kwi-GPS ukulandelela intshukumo kunye nokuchonga indawo okuyo. Uya kumangaliswa kukwazi ukuba kwenzeka njani kule mihla inkqubo yokulandela umkhondo we-GPS. Inkqubo yokulandela umkhondo we-GPS ayisetyenziswa kuphela ezimotweni, kodwa ngeenjongo ezahlukeneyo nayo, njengokulandela impilo yabantu abadala, abantwana, eofisini ukujonga abasebenzi, nokunye. Idatha erekhodwa sisixhobo seGPS inokugcinwa kwiyunithi yokulandela umkhondo okanye ithunyelwe kwisixhobo esiqhagamshelwe kwi-Intanethi kusetyenziswa itekhnoloji yeselula, isiginali yerediyo, okanye isatellite yanamhlanje. Le nkqubo yenza ukuba indawo iboniswe ngokuchasene nokubuyela umva kwemephu nokuba kukwelo xesha okanye okanye emva kokukhuphela, kusetyenziswa isoftware yokulandelela iGPS. Izicelo zokulandelela ziyafumaneka kwizixhobo zefowuni.
Yintoni iGPS Tracker yaBantwana?
Sisisixhobo sokulandela umkhondo we-GPS esisebenzisa i-Global Positing Service ukulandelela intshukumo kunye neendawo zomntwana. I-tracker ye-GPS yinkqubo ye-satellite ye-navigation yomhlaba ebonelela ngendawo yendawo ye-geo yomntu ekujoliswe kuye kumamkeli we-GPS. Ngoncedo lwezixhobo zokulandela umkhondo, nangona ungakwazi ukulawula ukuhamba kwabantwana bakho, qiniseka ukuba bakhuselekile kwaye okwangoku bakhona kwaye bayaphi. Isixhobo sokulandela umkhondo we-GPS sinokufumaneka ngeendlela ezahlukeneyo njengewotshi, ikhonkco, isongo, kwaye inokubekwa nakwizihlangu zabantwana bakho ukuqhubeka nokulandela umkhondo wendawo.
Ukuchaneka kwenkqubo yokulandela umkhondo ye-GPS
Ngokutyibilikayo, inkqubo yokulandela umkhondo we-GPS iyamangalisa kwaye ichanekile ngokupheleleyo xa abantwana bakho bengaphandle. Kodwa, kusekho ukuphazamiseka xa umqondiso uvaliwe ngamabhulorho, izakhiwo, okanye imithi. Ngokwesiqhelo, isixhobo sokulandela umkhondo se-GPS asinamkeli xa abantwana besekhaya.
Khetha i-Tracker yeGPS elungele abaNtwana baKho
Siqulunqe uluhlu lweempawu ezibalaseleyo onokuthi uziqwalasele xa usemarikeni ukuthenga itracker yeGPS yabantwana bakho, kwaye yeyiphi isixhobo sokulandela umkhondo oziva uphilile.
Indlela yokuBiza ngeendlela ezimbini
Le yeyona nto iphambili ekufuneka uyisebenzisile kwimeko enjalo xa ucinga ukulandela umntwana wakho. Inqaku elimangalisayo lenza umntwana wakho akwazi ukubeka umnxeba kwinombolo ebonelelweyo evela kwisixhobo xa kufuneka njalo. Njengomzali okanye umnakekeli, uya kuba nakho ukufaka isicelo kumnini-tracker kwifowuni yakho nangaliphi na ixesha. Le ndlela ivumela omabini amaqela ukuba abizane ngokwaziwa ngokuba yiNkqubo yeendlela ezimbini zokuBiza. Ayibandakanywanga nakweziphi izixhobo, ngoko ke kubalulekile ukuba ulandelele ukhuseleko lwakho.
Zombini iiNqaku zokuNgena kwamanzi kunye nokuqina
Uyayazi ngcono indlela abantwana abachaphaza ngayo, kwaye ngokuqinisekileyo ungcono uyazi ngemeko yokudlala abayaphule. Ke xa uzama ukuthenga isixhobo sokulandela umkhondo we-GPS kufuneka ujonge ukuqina kwawo. Oomakhwetha babantwana banokuthatha ukubetha ngokulula, kwaye abantwana abancinci abasoloko bekhumbula okanye bethambile ngezixhobo ze-elektroniki. Kwinkathalo yomntwana omncinci, isixhobo seGPS sinokulahlwa, kuvezwe, kushiywe ngaphandle, njl. Ngenxa yezi zizathu zichaziweyo, uya kufuna umkhombandlela onokuthatha iilike ezimbalwa kwaye uqhubeke nokulandela umkhondo.
Yintoni iiAlter esekwe kwindawo
Uninzi lwabazali lufuna ukwazi ukuba baphi abantwana babo, nokuba kuse esikolweni, endlwini, okanye ngedilesi, kuba kubalulekile kukhuseleko lwabantwana babo. Kunzima ukufumana isixhobo esiya kuthi sikwazise ngalo lonke ixesha bengena okanye bephuma kwindawo ethile. Kufuneka ujonge amanqaku ngokubhekisele kwisaziso se-geofence, njengendlela abazali abaya kwaziswa ngayo xa abantwana babo bangene okanye bephuma.
Uninzi lweentlawulo zokubhalisela
Kuya kufuneka ukuba uhlawule malini kwaye kuyakudlalwa nini xa uthenga isixhobo sokulandela umkhondo we-GPS ukulandelela umntwana wakho. Ubukhulu becala umboneleli weenkonzo zokulandela umkhondo we-GPS zifuna umrhumo wenyanga wokusebenza, ke qiniseka ukuba ufunda iindleko zenyanga
Malunga nobomi bebhetri
Okukhona ifowuni ichaza iindawo, ngakumbi amandla ebhetri. Ukhe wafumana imeko efanayo kunye nezixhobo zakho ezisebenzisa ukuba xa usebenzisa i-GPS yokuhamba ngendlela usebenzisa iMephu kaGoogle, ibhetri yefowuni itsala zonke ngokukhawuleza. Ubungakanani bebhetri okanye ubomi buhlala bulungelelaniswa ngokuthe ngqo nokuba isixhobo singakanani, ngoko ke gcina engqondweni kwaye uthenge i-tracker encinci ebhetri elungileyo. Nalu uluhlu lwezinto eziphambili zokulandelela iGPS njenge:
UkuBekwa kweliso kwaBantu abaDala
I-GPS ye-Ankle yobuqu
I-GPS GPS Tracker Jonga
Ukujonga amanzi kwi-GPS engafumaneki ebantwaneni
I-GPS Pets Tracker
5078 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-33 Namhlanje